Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 3) Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 3)
Nyaya DzeBonde - Saizi Yechombo Chemurume Ine Inebasa Here Pabonde? (Part 3)
Chombo chigusvani: Kune varume vane zvombo zvidiki pabhinzi yomukadzi ane bhinzi hombe. Asi chero murume akadai anokwanisa chete kukuzvarisa mwana uye mwana iyeye kana ari mukomana anokwanisa kuzoita zichombo ziguru.
Nyaya yokukura kwechombo inonetsa kuhwisisa nokuti haina pateni yainotevera. Chatinongoziva ndechkuti murume akasvika makore 21,hazvichaiti kuti chombo chake chiwedzere kukura chero akashandisa mushonga wakadii zvawo kana kuswera achidhonza. Asi anokwanisa kuwedzera kuoma kwacho kana chimire. Izvi zvinobva nokuwanda kweropa ronoenda muchombo kana chimire. Murume akawana mukadzi anogarotamba nechombo chake kwenguva asi asingamuitisi kubudisa urume, zvinowedzera ropa nokuwedzera kumira kwechombo.
Papikicha yokutanga iyi ndeyomurume ane chombo chisina muviri.Panongova nechimusoro chete. Kwahi zvinokwanisika kuitika kazhinji kuvarume vanozvagwa vakaremara zvimwe zvinhu mumuviri zvikuru murume ane magaro echikadzi nedumbu guru zvinoreva kuti pa Pubety paya haana kuwana ma HORMONES akakwana echirume. Hazvirevi kuti ukaona murume ane magaro makuru kana chidumbuzenene wobva wafunga kuti ane kachombo kadikidiki. Hwisisazve kuti murume ane chombo chakadai haakwanisi kupfeka makondomhu nokuti chombo hachina muviri. Asi anongo budisa urume hwakawanda uye hune mhodzi kungoita sevamwe varume, saka akakusiira urume pamberi unokwanisa kuita mimba.
Pikicha yechipiri ndeyemunhukadzi ane bhinzi yakareba kuita sekachombo kadiki. (Vaya varume vasingazivi pane bhinzi chitooneraiiwo apa) Mukadzi uyu anongozvarawo zvinoita vamwe. pakuvatana naye bhinzi yake inomirawo zvinoita dzevamwe asi kungoti inoonekera kuzhe kwematinji chete. Zibhinzi rakadai rinozokura musikana ava kutanga humhandara. Saizi yomusikana hainei nokuti ane bhinzi yakadii. Tiri kuBoarding School taiva nomusikana ainzi Chipo ange ane bhinzi yakareba kuda 5 cm isina kumira. Akamitiswa achangopedza FORM 4. zvinoreva kuti anozvara.
Tiri pano kudai kune varume vasingazivi kuti matinji asina kudhonzwa akamira sei, tarisai mukadzi uyu muone matinji ake ari pasi pebhinzi yake hombe iyo. Matinji akadhonzwa akareba kupfuura miromo wepamberi unohi MAJORA.
Kana zviya uchisarudza murume/mukadzi wekuroorana naye. pane zvakawanda zvaunofanira kufunga nezvazvo nokuti nguva yamunoita mese makaroorana unguva yakareba inokwanisa kuita makore anopfuura makumi mashanu saka ukakanganisa kusarudza zvoreva kuti uchanetseka nazvo nguva refu. Kana uchiziva kuti unoda chombo chikurukuru, feya feya kuvakomana, vanokuudza mukomana anacho, zvikuru kumamisha kwavanonodhidha mumadziva vasina kupfeka. Mumadhorobheni unokwanisa kuona kufuta pabhurugwa. Zivazve kuti chombo chinooneka chiri chikuru chivete zvinoreva kuti chamuka hachinyanyi kukura. Chidiki kana chivete chinokura zvakawedzera chamuka.
Varume vakawanda vanotarisa mazamu, magaro, maziso, etc emusikana vasati vanyenga. Saka vasikanawo vanobvumigwa kutarisa zvavanoda pamukomana. Asi vakawanda hatinei nezvechombo izvi. Moyo wemunhu ndicho chinhu chikuru kupfuura zvimwe.
Asizve kana murume akati madanana paya okubvunza kuti wakadhonza matinji here, iwe muudze zvawakaita kana kusaita asi wadaro wochimubvunzawo kuti iye akakudzawo chombo here. Muudze kuti wakaudzwa kuti average yemurume iri pa 33 cm, kuti akasirewo kuita complex yaari kuzama kukuitisa. Varume kazhinji vanoda kuti musikana aite INSECURITY isingaite zvachose. Asi isu tikatevedzerawo izvi ivo vanokasira kukuudza kuti wamutuka. Sokuti moda kurhojana womuudza kuti chombo chake chidikidiki pane zvawakaona papikicha. Unomupa COMPLEX yaanoita nguva kuti ipere, nokuti varume vakawanda vanofunga kuti chombo chikuru ndicho chete chinogutsa mukadzi.
Asi havazofungi kuti isu tinokwanisawo kufunga kuti matinji makuru ndiwo anogutsa murume. Munhu taura zvinovaka umwe wako kwete zvinomubvisa CONFIDENCE.
Mukadzi ajaira hombe anozoguta here nediki? Varume vanonetseka nenyaya yokuti kana akaroora mukadzi asiri mhandara anofunganya kuti kuda murume waiva nomukadzi uyu ange ane hombe kupfuura yake. vanoda kuziva kuti mukadzi ange ajaira chombo chihombe anozoguta here nechidiki. Mhinduro yomubvunzo uyu inoti iyo "Hongu anoguta kana iwe murume wake ukajairawo kumunonokera uye kumuitira zvaanokuudza kuti uite. Kana pasina zvaakuudza bvunza kuti chii chinomunakira akuudze.
Varume ndimi munoda kungoti ukadanana nomusikana woda kutomukwira asi usina kumuroora. Akaramba kukwigwa womubingisa nokumupa puresha kuti abvume, ipapo iwe hauna kana hanya naye somunhu. Uri kungoda kuti avhure makumbo. Saka unenge uchiti achazoroogwa nani? Ndosaka vamwe venyu vachizotadza kuwana mhandara dzokuroora. Kana wapedza nyika yese uchingoboora mhandara unofunga kuti dzasara dzacho dziripi?
Kana musikana akangoziva murume umwe chete, akagarogutswa naye, haanei nokuti vamwe varume vane hombe here kana diki. Iwewo murume ukangoziva mukadzi umwe chete mhandara yako iyoyo, mukakura mese pakurhojana, haumbofungi kuti mukadzi ari kukukombeya nevamwe varume.
RESEARCH pasaizi yechombo! Vakaita RESEARCH vanoti ivo ukaongorora varume vane zvombo zvihombe zvinohi zvakakura chose kupfuura zvevamwe, uchaona kuti vashoma asi vazhinji vevashoma ivava vanhu vanofarira kuita zvechingochani kana kuti kuvata nevakadzi zvese nevarume, (BI-SEXUAL)
Ukatarisazve varume vane mazibhora makuru, vanohura kupfuura vane AVERAGE SIZE.
KuUSA nokuEurope ngochani dzine AVERAGE size yechombo yakakura kupfuura AVERAGE size yevarume vasiri ngochani. Hakuna anohwisisa kuti chikonzero chacho chii.
Tadaro tinohwazve kuti varume vekuNorth Africa nekuWest Africa vane zvombo zvikuru kupfuura vekuCentral ne Southern Africa. Asizve ngochani dzekuNorth neWest Africa dzine zvombo zvikuru kupfuura varume veko vasiri ngochani.
Saka pamwe ukada murume ane chombo chikurukuru uchazohwa zvohi anopota achiroja vamwe varume. Kana wada murume ane mabhora makuru, hwisisa kuti anohura kupfuura vane AVERAGE kana madiki.
Iko kuita chombo chakakurisa kuremara saka hazvishamisi kuti fungwa dzake dzakaremarawo zvokuti ingochani.